Doka ara-barotra amin'ny varotra atiny: toro-hevitra 4 sy tetika | Martech Zone
Talata, Martsa 24, 2020 Talata, Martsa 24, 2020 Alice Jones
Ny marketing amin'ny atiny dia eny rehetra eny ary mihasarotra hatrany ny mamadika ny prospecta ho mpanjifa maharitra amin'izao fotoana izao. Ny orinasa mahazatra dia sarotra ny mahatratra na inona na inona miaraka amin'ny mekanisma fampiroboroboana karama, saingy afaka manatsara ny fahatsiarovan-tena sy mitondra fiara amin'ny fampiasana izany teratany dokam-barotra.
Tsy foto-kevitra vaovao eo amin'ny sehatra an-tserasera io, fa marika be loatra no mbola tsy manararaotra azy amin'ny fomba feno. Fahadisoana lehibe no ataon'izy ireo satria ny dokam-barotra zanatany dia manaporofo fa iray amin'ireo tetika fampiroboroboana ahazoana tombony indrindra izay saika manome antoka ny hamerenana ny vola azo amin'ny famatsiam-bola.
Fa ahoana ny fiasan'izy io? Azonao atao ve ny mandanjalanja tsara eo amin'ny dokam-barotra zanatany sy ny marketing amin'ny atiny? Raha tsy tena azonao antoka ny fomba hamaliana ireo fanontaniana roa ireo dia manohiza mamaky mba hahalalanao ireo fitsipika fototry ny dokam-barotra zanatany amin'ny marketing amin'ny atiny.
Tsy tsiambaratelo fa manjaka eo amin'ny tontolon'ny nomerika ny varotra atiny, fa ahoana kosa ny dokam-barotra zanatany? Raha tena te hahalala ny fomba fiasa ianao dia tsy maintsy azonao ny dikan'izany ary zahao ireo antontan'isa fototra amin'ity sehatra ity.
Ny dokam-barotra tera-tany dia ny fampiasana doka misy karama izay mifanaraka amin'ny endrika, fahatsapana ary fiasan'ny endrika haino aman-jery isehoan'izy ireo. Ho hitanao matetika ny doka misy anao amin'ny ampahany amin'ny fampahalalam-baovao sosialy na amin'ny tranokalanao tianao ho toy ny tolo-kevitry ny lahatsoratra.
Antontan'isa momba ny doka
Ny endrika votoaty toy izany dia mitovy amin'ny safidin'ny fanontana mahazatra ny sehatry ny fifandraisana omena. Izany indrindra no mahatonga ny dokam-barotra tera-tany mandaitra sy azo itokisana:
Ny doka fampisehoana teratany dia miteraka taham-pivoarana (CTR) 8.8 fotoana avo kokoa noho ny doka mahazatra.
70% ny mpanjifa aleony mianatra momba ny vokatra amin'ny alàlan'ny atiny fa tsy doka nentim-paharazana.
Roa ampahatelon'ny mpampiasa no mahita atiny naroso ho endrika mahasoa indrindra amin'ny dokam-barotra zanatany.
Mandany saika ny mpanao dokambarotra amerikana $ 44 lavitrisa amin'ny doka zanatany isan-taona.
Tombontsoa amin'ny dokam-barotra zanatany amin'ny marketing amin'ny atiny
Mazava ho azy fa mahery ny dokam-barotra zanatany, saingy tokony ho fantatrao fa miaraka amin'ny tombony lehibe azo avy amin'ny tombony azo ampiasaina izy io. Ireto ny tombony lehibe azo avy amin'ny doka teratany amin'ny varotra atiny:
Ny dokam-barotra tera-tany dia tsy miditra an-tsehatra: Tsy toy ny endrika fampiroboroboana hafa, ny doka zanatany dia raisin'olon-droa sy tsy mampiditra. Tahaka ny atolotry ny anarany, ny doka toy izany dia toa voajanahary sy voajanahary, izay mahatonga azy ireo ho tia kokoa noho ny dokam-barotra amin'ny banner na popup.
Mendri-pitokisana ny dokam-barotra tera-tany: Matetika ny olona dia mihevitra ny dokam-barotra tera-tany ho mendri-pitokisana sy azo itokisana. Tsy mahagaga izany, indrindra raha mamorona fampifangaroana doka sy marketing amin'ny atiny lavorary ianao. Amin'ity tranga ity, ny atiny fampiroboroboana mahaliana fotsiny no azonao atao.
CTR avo kokoa: Ny doka teratany dia manana tahan-tsindry Click-through (CTR) ambony lavitra noho ny endrika dokam-barotra mahazatra, izay vokatry ny fahatokisana sy fahatokisana azy ireo. Ity karazana doka ity dia tsy mahasarika loatra, ka tsy mampaninona ny mpampiasa ny mandany ny atiny sy manaraka azy ihany amin'ny farany.
Ny doka teratany dia mifanaraka amin'ny olona rehetra: Ny fitambaran'ny dokam-barotra zanatany sy ny famoronana atiny dia mifanaraka tanteraka amin'ny olona rehetra tafiditra ao amin'ny orinasa. Tian'ny mpanjifa izany satria mamoaka atiny misy kalitao, raha tianao kosa ny mpanonta satria tsy manelingelina ny lahatsoratra organika. Farany, ny dokam-barotra dia tia dokam-barotra avy any an-toerana satria manome valiny kendrena.
Mifanentana amin'ny sehatra rehetra ny dokam-barotra zanatany: Azonao atao ny mamoaka doka amin'ny fiteny saika isaky ny fantsom-pifandraisana misy. Manomboka amin'ny media sosialy sy tranokala ka hatramin'ny magazine sy bokikely nentim-paharazana dia azo ampiharina amin'ny mpampita vaovao rehetra ny dokam-barotra zanatany.
Fomba 4 hanatsarana ny doka zanatany
Ankehitriny rehefa azonao ny endrika manakiana ny dokam-barotra zanatany, ny hany sisa tavela dia ny mianatra mampifangaro azy amin'ny ezaky ny varotra atiny. Manomana lisitr'ireo torohevitra sy fika efatra azo ampiharina izahay:
Tip # 1: Ataovy ao an-tsainao ny mpanatrika
Ny fitsipika voalohany amin'ny dokam-barotra zanatany dia tsy tokony ho centric-centric fotsiny ary hanoratra amin'ny sain'ny mpihaino kendrenao. Aza adino fa ny doka teratany an-tsehatra ambony dia tsy inona fa ny atiny avo lenta izay mitaona ny mpamaky amin'ny hafanam-po sy kalitao.
Ny asanao dia ny famakafakana ny mahaliana ny vinavinanao ary mifantoka amin'ny lohahevitra mifanaraka amin'ny zavatra antenain'izy ireo, fanantenana, zavatra ilaina ary zavatra inoany.
Jake Gardner, an mpanome andraikitra at serivisy fanoratana matihanina, milaza fa zava-dehibe ny mahatakatra ny hevitry ny mpanjifa momba ny lohahevitra iray: “Andramo fantarina ny olana sedrain'izy ireo. Amin'izay ianao dia afaka manomana atiny avo lenta izay mandrisika ny olona handray andraikitra rehefa mamaky. ”
Mandritra izany fotoana izany dia tokony hieritreritra ny fantsona fizarana tsara indrindra ianao. Te-hampiseho doka amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy ve ianao sa handeha amin'ny pejy atoro anao? Ny tolo-kevitray dia ny hitrandrahana ilay fantsona fantatrao fa mety hahatratra ny mpihaino kendrenao manokana.
Tip # 2: Mamorona kopia miavaka
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mihevitra ny tendrony faharoa ho zava-dehibe satria mahatonga ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny fampielezan-kevitra mahomby sy ny doka tsy mahomby. Raha ny tokony ho izy dia tokony hanao izay rehetra ilaina ianao raha te-hanomana kopia miavaka ho an'ny doka tsirairay avy.
Voalohany indrindra, ny atiny dia mila fampahalalana be, fanabeazana ary / na fialamboly. Faharoa, ny doka zanatany dia antenaina ho kendrena ary tsy mitanila. Ny tiana hambara dia ny fanaovana fehinkevitra atosiky ny angon-drakitra ary hanohana ny fanambaranao amin'ny porofo.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy lavorary ny lahatsoratrao raha ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana. Ny lesoka tokana dia mety hanimba ny lazanao, noho izany dia tsara kokoa raha jerenao indroa ny sombin-javatra rehetra alohan'ny hiainana. Raha tsy tena fotoananao ny fanitsiana, mampirisika anao mafy izahay hampiasa sehatra nomerika toa Grammarly or Hemingway.
Tip # 3: Manatsara ny pejy fitobiana
Ny tanjona faratampon'ny doka rehetra dia ny famindrana ny mpampiasa amin'ny pejy fitaterana mifanaraka amin'izany. Amin'ny toe-javatra toy izany, tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny hafatra momba ny atiny noforoninao ny pejinao.
Zava-dehibe ny fampiasana ny fomba sy ny tonon'ny fanoratana tahaka izany mba hiantohana ny haavon'ny fahamendrehana amin'ny marika. Mazava ho azy, ny pejy fipetrahana dia tsy maintsy mampiroborobo ny vokatra na serivisy vakin'ny vinavinanao.
Ary farany, ity pejy ity dia tsy maintsy misy fiantsoana hetsika mazava sy tena hita maso (CTA). Ny bokotra CTA tsara apetraka dia manome torolàlana fanampiny ho an'ny mpitsidika ary asehony azy ireo ny fomba fidirana amin'ny fipetrahana.
Tip # 4: Fepetra hivoarana
Ny toro-hevitra farany amin'ny lisitray dia ny fandrefesana ny valin'ny atiny momba ny doka natokana ho anao satria io no fomba tokana hanatsarana ny fampielezan-kevitra amin'ny ho avy. Mora kokoa ity asa ity raha mametraka tanjona tsara ianao ary mamaritra ireo mari-pamantarana mahomby (KPI).
Amin'ny ankapobeny, be ny dokambarotra mifantoka amin'ny masontsivana roa - ny fomba fijery sy ny tsindry. Na dia manan-danja tokoa aza ireo KPI roa ireo, dia manolo-kevitra ny hifantoka amin'ny singa fahatelo izay manambara mivantana ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao. Miresaka momba ny firotsahana amin'ny tsindry aorian'ny tsindry izahay, masontsivana iray lehibe izay mampiseho mazava tsara ny zava-bitan'ny dokam-barotra zanatany.
Ny famoronana atiny dia iray amin'ireo hevitra marketing manan-kery indrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika, saingy tsy mora ny mahita ny toerana misy anao amin'ny masoandro dizitaly miaraka amin'ireo mpifaninana marobe isaky ny akany. Io no misy ny doka fanaovan-dokambarotra zanatany hanampiana ireo orinasa hampitombo ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia nohazavainay ny hevitry ny dokam-barotra zanatany ary nasehonay anao ny fomba efatra hanambarana azy tsara amin'ny varotra atiny. Tokony hampiasa an'ireto toro-hevitra sy tetika ireto ianao handrafetana ny doka fampielezan-kevitra zanatany tsara kokoa, saingy alao antoka fa manorata hevitra raha mila soso-kevitra bebe kokoa avy aminay - faly izahay hamaly!
Tags: teratany dokam-barotrafamaritana dokaantontan'isa momba ny dokatoro-hevitra momba ny dokam-barotra teratanydoka fampisehoana teratanyoutbrainhaino aman-jery sosialyatiny naroso
Alice Jones dia mpivarotra nomerika avy any San Francisco, Kalifornia. Manoratra lahatsoratra bilaogy ho an'ny tsara indrindra izy manohy serivisy masoivoho mpamorona atiny. Alice dia renin'ny zaza roa ary mpanao yoga mafana fo.
Inona ny atao hoe IP Warming?